Ady miaramila hanala ny nosy mitsingevana manamorona an'i Neily
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Ady miaramila hanala ny nosy mitsingevana manamorona an'i Neily
Ny brigade engineering an'ny tafika mpiaro ny vahoaka Uganda (UPDF), miasa amin'ny baikon'ny Lehiben'ny tafika, ny jeneraly David Muhoozi, dia miasa mba hanala nosy mitsingevana. Nikatona turbine ity nosy ity tao amin'ny toby famokarana herinaratra elektrika ao Jinja, akaikin'ny loharanon'ny reniranon'i Neily.
Manomboka amin'ny sabatra ohabolana ka hatrany amin'ny angadinomby dia nanilika ny basiny ireo miaramila ary sahirana ary naparitaka tamin'ny toerana fiadiana vaovao. Mitifitra valala izy ireo izay nanimba ny avaratra atsinanan'ny firenena. Mampihatra ny toromarika momba ny fanidiana ny filoham-pirenena izy ireo ka manome baiko ny olom-pirenena hijanona ao an-trano aorian'ny areti-mandringana COVID-19.
Ny sakana dia niteraka halalaka 4 hektara, 4 metatra ny halaliny nosy mitsingevana antsoina koa hoe Sudds tao amin'ny farihin'i Victoria izay niteraka fahatapahan'ny fahatapahan'ny firenena any Oganda. Nikatona turbine tao amin'ny toby famokarana herinaratra mahery vaika ny fanakanana, ary maty ny herinaratra. "Mamerina ny azy io farihy io taorian'ny fanitsakitsahana ny morony," hoy ny injeniera Besigye Bekunda, lehiben'ny borigady injeniera ho an'ny tafika.
Ny fahatapahana koa dia nahatonga ny fampielezam-peo nataon'ny filoham-pirenena Oganda Yoweri Museveni momba ny krizy COVID-19 nahemotra adiny iray. Naneho hevitra momba ny delestazy manerana ny firenena ny talata tolakandro, ny Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Fahefana mifehy ny herinaratra (ERA), Ziria Tibalwa, dia nilaza fa ireo masoivohom-pirazanana dia manaparitaka ireo loharanom-pahefana voatahiry mba hahazoana antoka fa misy famatsiana herinaratra tsy tapaka ho an'ny firenena iray manontolo.
Nilaza i Tibalwa fa i Uganda amin'izao fotoana izao dia miankina amin'ny 183 megawatt avy amin'ny tohodrano Isimba, 30 megawatt avy amin'ny zavamaniry masoandro 3, 52 megawatt avy amin'ny toby famokarana herinaratra any Namanve, ary 120 megawatt avy amin'ny zavamaniry mini-hydro 2 any amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena.
Ny tafika dia nazoto niaro ny mpanarato maniry hijinja vokatra, anisan'izany ny akondro sy akondro maniry eo amin'ny nosy. Ny PDF dia miomana ho an'ny Sudd lehibe kokoa izay miakatra ambony.